Brits iray amin'ny dimy no miasa amin'ny pôrnôgrafia raha marina ny karama ary azo antoka ny asa
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Brits iray amin'ny dimy no miasa amin'ny pôrnôgrafia raha marina ny karama ary azo antoka ny asa
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovao momba ny lamaody • Films • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Music • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny famihinana malaza momba ny lalan'ny asa izay noheverina ho fady henjana dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana fotsiny, niditra an-tsokosoko tao amin'ny akademian'ny olon-dehibe ary niteraka antso ho an'ny famoronana "pôrnôgrafia amin'ny fidirana" ho an'ny tanora.
Ireo tanora dia nanadino kokoa ny hiditra amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia, raha ny 8% amin'ireo mihoatra ny 55 kosa no nihevitra izany fiovana izany.
Maherin'ny ampahatelony (34%) no nijery sary vetaveta, izay noheverina ho indulgence mahamenatra, ho "ampahany eken'ny fiaraha-monina maoderina."
Ny valim-panadihadiana vaovao iray dia nahitana fa efa ho 20% ny anglisy no miditra amin'ny sehatry ny asa vetaveta, raha toa ka ampy ny onitra ara-bola ary milamina ny tontolon'ny asa.
19% amin'ireo olon-dehibe britanika no nilaza fa hieritreritra ny hiasa amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia izy ireo dia manondro fa ny fanaovana firaisana dia lasa ampahany "azo ekena" amin'ny fiarahamonina.
Araka ny valim-pifidianana, 34% amin'ireo olon-dehibe anglisy no nijery sary vetaveta, izay noheverina ho indulgence mahamenatra, ho "ampahany eken'ny fiaraha-monina maoderina."
Raha ny fahitana azy dia toa nieritreritra ny hiditra ao amin'ilay ilay tanora mamoafady indostria - 32% amin'ireo 18 ka hatramin'ny 34 taona no nieritreritra izany - raha ny 8% amin'ireo mihoatra ny 55 taona kosa no nihevitra izany asa izany.
Na eo aza ny fiheverana misokatra amin'ny indostria, na izany aza, somary maherin'ny antsasaky ny (51%) ny valim-pifidianana no niaiky fa manahy izy ireo raha mahita fa misy olon-dehibe olon-dehibe mamokatra atiny amidy amin'ny tranokala toa an'i Pornhub na OnlyFans.
Anisan'ireo latsaky ny 35 taona, 41% ihany no nilaza fa mety hiahiahy momba izany vokatra izany izy ireo, raha 59% amin'ireo mihoatra ny 55 no hahita izany antony izany.
Ny fanadihadiana ireo olon-dehibe britanika 2,087 dia notanterahan'ny fikambanana mpanao asa soa manohitra ny pôrnôgrafia ny Tetikasa miboridana miboridana, izay niantso ny valim-pifidianana fa manelingelina, manamarika fa ny fampitomboana ny fahafantarana ny isan'ny “mpilalao” vetaveta an-tsokosoko sy hararaotina mifanohitra amin'ny sitrapon'izy ireo dia toa tsy mandika olona manalavitra ny indostria.
"Misy ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra izay mampiasa votoaty mazava tsara - votoaty izay misy fiatraikany azo tsapain-tanana sy manimba eo amin'ny fifandraisana, ny fahasalamana ara-tsaina ary ny lanjan'ireo mpijery sy ireo miasa ao amin'ny indostria," Naked Truth Project Ny mpanorina, Ian Henderson, dia nilaza fa nitantara ny fiparitahan'ny pôrnôgrafia nandritra ny fiainana mahazatra rehetra.
Ary ny famihinana malaza momba ny lalan'ny asa noheverina ho fady henjana dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana fotsiny, niditra an-tsokosoko tao amin'ny akademia ho an'ny olon-dehibe ary niteraka antso ho an'ny famoronana "pôrnôgrafia amin'ny fidirana" ho an'ny tanora.
Raha ireo tranonkala malaza indrindra mampiantrano vetaveta fitaovana - avy amin'ny tamba-jotra pôrnôgrafia manjaka ao MindGeek mankany OnlyFans'fidirana vao haingana kokoa tao amin'ny indostria - indraindray iharan'ny fanamelohana ataon'ny hery ivelany toy ny mpikirakira fandoavam-bola na mpampiantrano tranonkala, ny fampitahorana indraindray dia tsy nahavita nanakana ny indostria mihanaka.
Tamin'ny ankapobeny, ireo fihemorana ireo dia niteraka fiovan'ny fitondran-tena madinidinika sy indraindray. Taorian'ny fiampangana azy ho nanaparitaka sary vetaveta ankizy sy horonan-tsary fanolanana tamin'ny taon-dasa, dia nanavao ny politikany i Pornhub, namela ny mpiara-miasa voamarina sy voamarina ihany handefa atiny.
Ny OnlyFans dia toa efa saiky maty tampoka tamin'ny volana lasa satria nanambara ny votoatin'ny firaisana ara-nofo fa tsy maintsy apetraka amin'ny fomba tsy azo atao lisitra mainty ho an'ny mpandoa vola. Niverina ihany anefa ny tranokala tao anatin'ny andro vitsivitsy, nanambara fa “hampiato” ny fanovana ny politika, ka nahatonga ny fisentoana be avy amin'ny mpamorona atiny izay manome ny volany mivarotra nofinofy ao amin'ilay tranonkala sy ny mpanjifa.
Ny Birao Mpitsidika Guam dia manohy ny Trolley Guåhan maimaimpoana...
Torolàlana CDC vaovao ho an'ny Amerikanina momba ny Omicron Covid...